Ukuvakasha Kwendlu Eyakhiwe Ngamapulangwe Okut - I-Airbnb
Ukuvakasha Kwendlu Eyakhiwe Ngamapulangwe Okut
Monmouth, Maine, i-United States
I-indlu eyakhiwe ngamapulangwe ephelele ibungazwe ngu-Kimberly
U-Kimberly uthole izilinganiso zezinkanyezi ezingu-5 ezivela ku-94% wezivakashi zakamuva.
Le khabhinethi yabantu abangu-1-2 ithokomele, ilula, futhi ithule, okuyenza ibe indawo ekahle yokubaleka futhi ujabulele elinye lamachibi amahle kakhulu e-Maine! Ingabamba izihambeli eziningi uma unikeza owakho umatilasi womoya kanye/noma itende. Ukusetshenziswa kwama-kayak, amabhodi okugwedla, indawo yokucima umlilo, i-gas grill, nesiliphu sedokhi sesikebhe sakho esifakiwe.
Ikhabethe lethu linakho konke okudingayo ukuze ubalekele kahle, kungaba ubusuku obubili noma amaviki amabili. Sikunikeza amalineni, ikhishi eligcwele (izinto zokupheka, izitsha, amapuleti, izitsha, izibuko, njll), isiqandisi esigcwele usayizi, i-microwave, ipuleti elishisayo le-convection kagesi, umenzi wekhofi (kufakwe izinkomishi zekhofi K netiye), i-wifi, ehlakaniphile. I-TV, i-propane grill, umgodi womlilo (unezinkuni ezinikeziwe), nokuningi! Siphinde sibe nama-kayak namabhodi okugwedla atholakalayo ukuze asetshenziswe MAHHALA! Sifuna indawo yethu ibe indawo lapho ungabalekela khona, uzizwe usekhaya, futhi ukhululeke ukuze ukhululeke ngempela ngenkathi usahleli nathi.
4.90 · 109 okushiwo abanye
Ikhabhinethi yethu itholakala enhlonhlweni encane yeChibi laseMaine elihle kakhulu (iCobbosseecontee). Umgwaqo uwusoseshini lapho iningi lamakamelo kuhlala abanikazi nemindeni yabo, okwenza izinto zithule. Indawo yethu inendawo engashoni emanzini yokubhukuda kanye nedokodo lokubopha isikebhe. Imisindo yama-loon ecula echibini ebusuku kuyoba isikhathi sokuthula ongeke wasikhohlwa!
Ngihlala ngitholakala ngombhalo.